Turkiga ” Soomaaliya Dowlad ka dhalan meyso inta ay Ciidan Shisheeya Joogaan “ – XAMAR POST
Turkiga ” Soomaaliya Dowlad ka dhalan meyso inta ay Ciidan Shisheeya Joogaan “
By Mohamed Ahmed On Oct 28, 2017
Ra’iisul wasaaraha Wadanka Turkiga Bin Ali Yildirim aya sheegay in uu kor dhayo Xiriirka Laba geesood ka ah ee Soomaaliya iyo Turkiga, islamarkaana Turkigu uu siiwadi doono Adkeeynta Xiriirka.
Bin ali Yildarim ayaa Tilmaaday in Dowladiidu ay aad Soomaliya uga Taageereyso Dhinaca Amniga waxaa uu Xusay in Ra’iisul wasaare kheyre uu lawaadaagay Dadaalada Ay amniga ku suganayaan Turkiguna uu kaalintiisa ku qaadandoona.
“Joogitaanka Ciidamo shisheeye Masugikaraan Nabadda Soomaaliya” ayuu yiri Yildrim, wuxuu hadalkiisa ku sii daray in Turkigu uu gacanna Soomaaliya ku garan Istaagayo, Gacanna uu ku Taageerayo Bulshadda iyo Arrimaha Banii aadanimadda isagoo Adeegsanaya Ururadda aan dowliga ahayn.
Ra’iisulwasaaraha Turkiga ayaa carabta ku adkeeyay In Ciidamadda Soomaaliya oo la dhiso ay ku Xirantahay Nabadda Soomaaliya, Islamarkaana ay iyaga oo Qura Sugikaraan Nabadda Dalkooda, wuxuuna Mesha ka saaray Kaalinta Ciidamo Shisheeye ay ku leeyihiin Amaanka Soomaliya
Hadalkaan wuxuu Sheegay Mar ay Shir Jaraaa’id ku wada qabteen Ankara khayre iyo Yildirim.
Turkiga ayaa wada Dadaalo fir-fircoon uu Soomaaliga Kaga Taareya Dhismaha Ciidanka, Dadaalkaas oo uu laf dhabar u yahay Saldhiga Tababarka Military ee Turkigu uu Soomaaliya ka Furay Bishii lasoo dhaafay.
Saldhigaas oo ogolaanaya in lagu tababaro Ciidamo Soomaaliyeed oo Awood u leh Hanashadda Amaanka Dalka.
Madaxweyne Farmaajo oo war kasoo saaray Weerarkii Hoteel Naasa hablood 2